Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi UHarry Kane Ubuntwana Indaba Eningi I-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Lethal Striker owaziwa kakhulu ngeSiteketiso; 'HurriKane'. Indaba yethu yezingane zeHarry Kane kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF kanye ne-ON-Pitch amaqiniso amancane awaziwa ngaye.
Yebo, ungumdlali wonke umuntu okhuluma ngakho kusukela ngemuva kokuthatha i-Premier League ngesiphepho. Noma kunjalo uHarry usengumdlali ongekho abantu abaningi abazi kakhulu. Okuthandwa nguRonaldo, Messi, Rooney noBale badumile kakhulu futhi bavame kakhulu emaphephandabeni ukuthi siyazi cishe zonke izici zokuphila kwabo, kodwa lokhu akulona iqiniso kuHarry Kane. Uyazi nje ukuthi ungumdlali oyithandayo we-Premier League kanti iqiniso lokuthi uma umnika ibhola cishe uyothola amaphuzu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, vumela uqale;
Harry Kane Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Kwengane Ekuqaleni
Harry Kane Childhood Isithombe
UHarry Edward Kane wazalelwa ngo-28th July, i-1993 eCingord indawo engaphansi kwamadolobha aseNyakatho-mpumalanga eLondon - okuyindawo eqhele ngamakhilomitha amahlanu ukusuka enkundleni yasekhaya ka-Spurs, i-White Hart Lane. Wazalwa ngabazali ogama lakhe linguKim (uMama) noPatrick Kane (uBaba). Wakhulela eCingford eceleni komfowabo uCharlie futhi bobabili beya eCingford Foundation School.
UHarry Kane wakhulelwa ngendlela yokuphila yase-Ireland. Bobabili abazali bavela eGalway, idolobha elisogwini elisogwini olusentshonalanga ye-Ireland. Bavele bathuthela eLondon ukuze babe nezingane zabo. UHarry wakhula ekufundeni amasiko, amasiko, ulimi, umculo, ubuciko kanye nezincwadi zabaseLondon. Ithenda lakhe lebhola lezemidlalo lafika ngokwemvelo futhi lihlotshwe ngokofuzo emndenini kamama wakhe. Enkulumweni yamuva, uHarry Said;
"Ngicabanga ukuthi amagciwane ami ezemidlalo avela emndenini wamama emndenini nakuba isihloko siyingxabano eshisayo emzini ka Kane. Ubaba ngeke angithande ngikhulume lokho, kodwa ngicabanga ukuthi umkhulu wami u-Eric ohlangothini lukaMama wayengumdlali webhola, futhi wadlala ngezinga elihle. "
Izinkumbulo ezingalindelekile zikaHarry Kane Ubuntwana obubandakanyeka kuhilela isikhathi esihle esichithwa nomfowabo omkhulu uCharles. Ngokomama kaHarry kaKarry, "Bobabili uCharles noHarry banjengabafowabo abavela emphefumulweni ofanayo owehlukaniswe ngamabili futhi bahamba ngezinyawo ezine". UHarry wabona uCharles hhayi nje ngokuthi umfowabo omkhulu, kodwa into yakhe enkulu.
UCharles Kane (ngakwesobunxele) noHarry Kane (kwesokudla)
Harry Kane Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Ubudlelwano
UHarry Kane ube nobuhlobo besikhathi eside nobungane bakhe obuncane obuthandana noK Katie Goodland abathandayo ngayo yonke impilo yakhe.
Lo mbhangqwana ubonakala sengathi ujabule ndawonye futhi uKatie uvame ukuthumela izithombe namavidiyo ku-akhawunti yakhe ye-Instagram noHarry, kungakhathaliseki ukuthi ukuhlala ekhaya noma eholidini - futhi uye wathumela nabanye emidlalweni ka-Spurs.
U-Kane uqinisekisile ubuhlobo emuva komphakathi ngoFebhuwari ka-2015, etshela Esquire umagazini "Saya esikoleni ndawonye, ​​ngakho ubona umsebenzi wami wonke. Yiqiniso, uyitholile i-crazy encane. Ngicabanga ukuthi uke wahlala emaphepheni izikhathi eziningana ethatha izinja ngaphandle ".
Manje, akusona izindaba ukuthi izinyoni zothando zithanda ukutholwa nabezindaba ngokusebenzisa inja ehamba ezindaweni zaseHondon. Esithombeni esingezansi, bobabili uK Kane noK Kate bagqoka ama-hoodies abo abathandayo abathandayo njengoba bephethe inja eyodwa ngayinye.
UHarry Kane and Girlfriend, Kate on Dog Walk
Ngaphezu kwalokho, bobabili banendodakazi okuthiwa u-Ivy owazalwa ngoJanuwari 8, i-2017. I-Ivy inakekele kakhulu abezindaba ekuphumeni kwesikhashana kukababa wakhe kusukela ku-White Hart Lane okumele kuvuselelwe.
Isithombe esilandelayo sibonisa ukuthi umhlukumezi ubheke ngothando ngokuziqhenya kwakhe nentokozo yakhe - egqoke umhluzi omncane we-Spurs nomnsalo omuhle ekhanda lakhe - njengoba wamkhwelisa ngengubo yekhilimu, kuyilapho Kate ebheka ngokuziqhenya.
UHarry Kane nendodakazi, Ivy
UHarry Kane ukholelwa ukuthi umndeni wakhe uyinto ebaluleke kakhulu emhlabeni. I-trio yakha umbuthano wamandla othando. Ungumuntu omndeni omkhulu.
UHarry Kane nomndeni bathi i-Goodbye ku-White Hart Lane
Harry Kane Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -UMfoweth 'wakhe uthola ukuxoshwa ngaye
Umfowabo omdala ongumntwana wakhe ogama lakhe linguCharlie. UCharlie ufana nomntanakhe omncane, uHarry. Ungakwesobunxele esithombeni ngezansi. Uvame ukuphoqa ngaye.
Ukuhlaselwa okunzima phakathi kukaCharley noHarry Kane
Kwabalandeli abathile, kungase kube ukucasula uCharlie ngoHarry uma kuziwa ekubhaleni i-autographs. Kodwa uCharlie uyayithanda - futhi usayine ngisho ne-autographs njengomfowabo uma abalandeli abaqamba amanga ukuthi baqinisekile ukuthi unguHarry.
Empeleni, uCharlie uthola inzuzo ephelele yokuba ngumfowabo omkhulu webhola lezinyawo.
Okwenza uCharlie Ajabulele Ukuba nguHarry
Uthola iziphuzo zamahhala, uyakwazi ukuya emikhosini yomklomelo bese edlala igalofu okuningi noHarry.
Harry Kane Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Uqale njengomdlali we-Asernal
Umthombo ovamile we-banter phakathi kwabalandeli baka-Arsenal no-Spurs, kodwa umuntu ophakathi kungenzeka angazi ukuthi uHarry Kane empeleni waqala umsebenzi wakhe ozobambisana nabadlali base-Tottenham Hotspur abanobuhlungu kakhulu base-Arsenal.
Umsebenzi weHarry Kane Wokuqala E-Arsenal
The odumile "UHarry Kane, ungomunye wethu" izingoma zingase zisebenze manje - i-Kane iyadlula futhi ngalezi zinsuku - kodwa wayengu-fan of futhi umdlali omncane we-Gunners emuva kosuku.
UHarry Kane; Ngesinye isidlali se-Arsenal
Ngemuva kokubonakala eqenjini lakhe eligijima iRitgeway Rovers, wajoyina isikhungo se-Arsenal eseneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala e-2001, kodwa wakhululwa ngemuva kwenkathi eyodwa kuphela ngoba bezwa ukuthi akahambanga kahle.
Ubuyele emuva edlala i-Ridgeways Rovers iminyaka emibili, ngaphambi kokujoyina iWatford's academy okwesikhashana, wabe esephelela eSpurs. Futhi bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Harry Kane Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Wayengadlala iqembu le-Irish Football
Ngesikhathi sokubhala, uKane ubonakala njengelinye lamagama okuqala ohlwini lwabalandeli baseNgilandi - futhi ngempela isiqalo esiqinisekisiwe seqembu laseNgilandi - ukwehluleka kwakhe ukuzenza igama lakhe ezingeni eliphakeme kwambona esinikela ngokungathí sina ukucabangela ukudlala iRiphabhlikhi yase-Ireland esikhundleni.
UHarry Kane Uthanda Ithimba Le-Ireland
UKane wayefanele ukudlalela i-Ireland ngoyise, owazalelwa eGalway, kodwa ngo-Agasti 2014 wakhipha isinqumo sokushintsha, wathi ufuna ukungena eqenjini eliphakeme lase-England. Ngaphambi kwalokhu, owayengumphathi we-Ireland, uMartin O'Neill, wathi uKane ukhombisile isasasa elikhulu lokuthi kungenzeka amukele ukubizwa eqenjini lakhe futhi amele iqembu lakhe.
Ayikho into engcono kakhulu eqenjini lebhola lezinyawo nabalandeli bayo kuneqhawe elingumkhaya futhi, naphezu kweqiniso elishiwo ngenhla ukuthi uHarry Kane wachitha isikhathi esifushane njengengane emele abadlali basekhaya be-Arsenal, abadlali abafikanga ekhaya kakhulu eTottenham Hotspur Iqembu lebhola lebhola lezinyawo kunelabo abanamakhono.
UHarry Kane: U-5 Miles owazalwa e-White Hart Lane
Leli qiniso lichaza isizathu esenza i-Spurs fan ihlabelele -"UHarry Kane, ungomunye wethu" ingoma. Lo mculo uzwakala kuwo wonke umdlalo we-Spurs, futhi uqinisile kakhulu njengoba wazalwa endaweni, uvela emndenini wabalandeli baseTittenham futhi wafika eSpurs eminyakeni engu-11 kuphela. U-Kane uphumelele eqenjini lakhe futhi uhambe nomuntu odlala emasimini kuya kumdlali oqala ukuhamba naye. Lokhu kumenza abe intandokazi eqinile kumaLilywhites, kanti umshayeli uthi akafuni ukuhamba.
Ngaphandle kweqiniso elicacile lokuthi uHarry Kane ungumdlali webhola lezinyawo futhi ungumthandi womdlalo omuhle, uzimisele kakhulu eminye imidlalo - into ecacile ukubona ukuthi uyamlandela yini kwi-akhawunti yakhe ye-Twitter. Ukhuluma njalo emidlalweni yekhilikithi yocingo futhi ngokuvamile ehambisa izithombe zezinto zakhe zokugqoka igalofu.
UHarry Kane Udlala Igalofu
Ngaphezu kwalokho, ngezikhathi ezithile uthumela ama-tweets nezithombe zakhe lapho egijima noma ehamba ngebhayisekili, futhi kusobala ukuthi ubeka iso ku-MMA, njengoba enikela ihlaya lokulwa nenkanyezi engu-UFC uConor McGregor ku-Twitter! Ngabe ucabanga ukuthi uHarry “iSiphepho” uKane angakufaka ku-octagon?!
Okwenza uHarry Kane Uthande MMA
Harry Kane Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Uvele Wenziwa I-Movie
UHarry Kane uphathe isenzo se-movie
UHarry Kane wadlala indima yeCole Sear eceleni noBruce Willis enkundleni ye-1999 The Sixth Sense ngaphansi kwezingcweti uHaley Joel Osment.
Harry Kane Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ungumuntu we-Business Referee
UHarry Kane Umculi Webhizinisi
UHarry Kane uqhuba uhlelo lokuqeqeshwa kwebhola lezinyawo kubantu abasebenzayo abafisa ukuba ngabaphenyi. Amakilabhu amaningi abizwe futhi asetshenziselwa izinsizakalo zabo zokuncintisana kuze kube yimanje.
Harry Kane Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -I-Grammarian
UHarry Kane wenza lo msekeli omncane we-Spurs ukuba alungise isibonakaliso sakhe ngokushintsha 'u-' wakho 'ku-'uwe' ngoba unendaba ngabalandeli bakhe futhi uyazisa ukubaluleka kohlelo lolimi.
UHarry Kane wangisiza
Harry Kane Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Emthethweni Uboshwe Ukudlwengula
UHarry Kane UMfoweth 'Inlaw Uboshwe Ukudlwengula
Umthetho wokuba nomkhwenyana wokudlwengula umfokazi epaki amahora ambalwa ngaphambi kokushada nomzala kaHarry Kane okhulelwe. UDerry McCann, i-28, wabeka owesifazane oneminyaka engu-24 oneminyaka engu-2 ehlaselwa 'ngokuqhubekayo nokuhlelekile' kwamahora amabili eVictoria Park eHackney, empumalanga London. Abaphenyi bakholelwa ukuthi uhlele ukudlwengula owesifazane ohlukile kepha 'ulahlekelwe ithrekhi' wakhe wabe esethatha isisulu ekugcineni ngesikhathi ehamba ekhaya emva kokuhlwa ebusuku nabangani ekuqaleni kukaJanuwari 13. Ngemuva kokudlwengula ngokuphindaphindiwe wabibela nomakhalekhukhwini wakhe, wabe esetshela isisulu ... isisulu: 'Unenhlanhla angizange ngiyividiyo '.
Emahoreni ambalwa kamuva, umdlwenguli wezintatheli uMcCann washada ku-Vestry eBromley-by-Bow wabe esethumela izithombe zakhe nomkakhe omusha uKerry Hogg, 27, emphakathini wakhe Facebook ikhasi. UKerry, owayengazi ngalokhu kuhlasela futhi usanda kubeletha indodana kaMcCann, ungumzala wase-England no-Spurs uHarry Kane. Uyise nonina bangabantwana bakithi. Umyeni wakhe ugwetshwe ukuphila iminyaka eyisishiyagalolunye.
Harry Kane Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Uqeqeshwe noDavid Beckham ku-Age 10
Isithombe esilandelayo sibonisa kancane ukuhlangana kukaHarry noBeckham ngesikhathi sokuvakashelwa okuyingqayizivele kuDavid Beckham Academy e-2005. Namuhla, uK Kane uyakhula futhi efaka izinhloso zeqembu lakhe.
UHarry Kane wanqunyelwa ukuba alandele ezinyathelweni zikaDavid Beckham, kusho uthisha we-Pe ofundise inkanyezi yakwaSpurs kulesi sikole bobabili laba bafundi abebefunda.
UHarry Kane uhlangana noBeckham eneminyaka engu-10
Umshini we-Tottenham u-Kane waya e-Chingford Foundation School, esikoleni esifanayo uBeykham ahamba naye esencane enyakatho yeLondon.
Harry Kane Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -LifeBogger Izigaba
Sinikeza i-LifeBogger Biography Ranking yeHarry Kane.
Usuku olushintshiwe: Ephreli 26, 2020